Nnennen Side Pail
Niile Plastic Pụrụ
Kọmputa Tapawa Nwere Ike
Wet Hichapụ ịwụ
Mkpuchi ihe mkpuchi
Baseball Pail / ịwụ
Car Pasa batara
Etu ị ga - esi kwado ụlọ ezumike zuru oke na Halloween n’afọ 2020
site ha na 21-03-20
Jide n'aka na ị ga-enweta ihe ndị a dị egwu na abalị na ihe nkiri Halloween, juputara na boos na nlegharị anya Halloween bụ Saturday n'afọ a, nke na-ahapụ oge dị ukwuu maka ọrụ mmụọ. Ọ bụ ezie na ụzọ aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ nwere ike ịdị iche na ọ nwere ike ịdabere na ebe ibi, ọ pụtaghị na ị nwere ike ...
Ihe ndị a chọrọ na njirimara nke gbọmgbọm plastik
A na-ejikarị polyethylene, polyester na plastik ndị ọzọ eme ihe nke gbọmgbọm plastik, a na-ejikarị ya ejide acid acetic acid, tert butyl peroxide, mmanụ ala dị ize ndụ, acid na ọgwụ ndị na-eme ka alkali na-edozi ahụ, wdg. na-emebi emebi, ọ bụghị nke nchara, ...
Ọrụ na njirimara nke ịwụ plastik
A na-ejikarị polyethylene, polypropylene na plastik ndị ọzọ na-emepụta paịlị rọba (usoro: resin sịntetik, plasticizer, stabilizer, pigmenti) site na ịkpụzi ịkpụzi na ịkpụzi ọgwụ. A na-ejikwa ha maka nkwakọ ngwaahịa mpụga nke mmiri mmiri na ihe siri ike na ụlọ ọrụ dị iche iche dịka kemịkalụ ...
Kedu ihe anyị kwesịrị ị paya ntị na mgbe anyị na-eji gbọmgbọm injection plastik
Mgbe ejiri ya, enwere ike ịmata ya na usoro ndị a: usoro ọkụ. E jiri ya tụnyere Pee rọba gbọmgbọm, okpomọkụ na-eguzogide nke eyi plastic gbọmgbọm bụ ubé mma, ma n'agbanyeghị otú elu okpomọkụ bụ, e nwere ihe ize ndụ nke ịdị nro na-agbaze, otú elu okpomọkụ kwesịrị izere dị ka f ...
Adreesị: C5 Hutang Science and Technology Industrial Park Guangdian East Road Changzhou Jiangsu, China